Rita, Writing for My Sake!: April 2009
၀က်များ အပေါင်း မာစေကြောင်း
၀က်တွေကလဲ ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုမစိုက်ကြဘူး။
စင်ကာပူမှာ ကြက်သားလဲ ညှီလို့ မစားနိုင်ဘူး။
အမဲသား၊ ဆိတ်သားလဲ မချက်တတ်ဘူး။
ဒီကျွန်းမှာ သူတို့မှ မစားရရင် ကိုယ်တော့ ငတ်ပြီ။
မြန်မြန် နေကောင်းအောင် ကြိုးစားကြဟေ့။
၀က်သားပြည်သူ အပေါင်း အမြန်ဆုံး ကျန်းမာကြစေသောဝ်။
Gtalk မှ comment သုံးခု
10:56 PM Addy: ဟင် ဇာတ်တူသားတွေ စားနေတာလား မကောင်းဘူးလေ လုပ်နဲ့ ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင် ဘာဖြစ်ဖြစ်စားကုန်ကြတယ် ဆိုတာ တကယ်ပဲကိုး.အီး.............
me: နှိုင်းစရာလားကွယ် ဟင်
ဒီအဆင်နဲ့ ဒီ အဆင်
Addy: swine nay P eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
12:17 PM Anonymous: lu thar sar har
4:41 PM puluque: ဟုတ်တယ်ခင်ဗျား ဝက်ကလေးတွေ ကျန်းမာပါစေ...ကျတော်လဲ ကြက်သားမကြိုက်ဘူး
၀က်တုပ်ကွေး အကြောင်း ဖတ်ရန်
Posted by Rita at 4/29/2009 09:34:00 PM 13 comments Links to this post
Labels: Making Joke, Singapore
ကလေးငယ်များအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော အရေးကြီး အချက် (၅) ချက်
၁) ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့မှု ပေးရမည်။
၂) ချစ်ခင် ကြင်နာစိတ် ပွားတတ်အောင် လေ့ကျင့် ပေးရမည်။
၃) ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှုကို တန်ဖိုး ထားတတ်အောင် လေ့ကျင့် ပေးရမည်။
၄) နှလုံးရည်သတ္တိ (ဗျတ္တိ) ပြည့်ဝအောင် လေ့ကျင့်ပေးရမည်။
၅) မိမိကိုယ်တိုင် ကောင်းအောင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ကောင်းအောင် ပြုပြင် သွားနိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးရမည်။
(လူချွန် လူကောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင်၊ သင့်ဘဝ အောင်မြင်ရေး မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၉၅- ဇန်န၀ါရီလ)
စာအုပ်မှာ ရေးထားတဲ့ ရက်စွဲ အရ 2000 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှာ ကူးရေးခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်ပါ။
ကျွန်မ ကလေး စိတ်ပညာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
ကလေးတွေ (မျိုးဆက်တွေ) ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် လူကြီး မိဘ အသိုင်းအဝိုင်း (ပတ်ဝန်းကျင်) ရဲ့ အရေးပါမှု နဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့် အတွေးအခေါ်အပေါ်မှာ (အကောင်း ဖြစ်စေ၊ အဆိုး ဖြစ်စေ) လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိမှုကို ယုံကြည်တယ်။
အဲဒါကြောင့်ပဲ ဂျူး ရဲ့ "ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" ကို (ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုတာထက်) ယုံကြည်စွဲလမ်းခဲ့၊
တက်ဆူးကိုး ကူရိုယာနာဂီ ရဲ့ "ပြတင်းပေါက်က မိန်းကလေးငယ်" ထဲက "တိုမို" ကျောင်းကို တည်ထောင်သူ "မစ္စတာ ဆိုဆာကူး ကိုဘာယာရှီ" ကို အံ့သြ အားကျ မိခဲ့တယ် ထင်ပါတယ်။
ဆရာကျော်စောမင်း ကိုတော့ ဟန်သစ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဖတ်ကြည့် ကဏ္ဍ မှာ စသိခဲ့ရတာပါ။ သူ့ ဆောင်းပါးတွေဟာ ကျွန်မကို နဂို ရှိရင်းစွဲထက် ပိုပြီး ကြည့်တတ် မြင်တတ် စေခဲ့ပါတယ်။
တက်ဆူးကိုးရဲ့ စာအုပ်ကို ကျွန်မ လေး၊ ငါးတန်းလောက်မှာ ဖေဖေ့ စာအုပ်တွေထဲက ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။စဖတ်စမှာ ခပ်ရိုးရိုး ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ကလေးလိုပဲ နားလည် ဖတ်ရှု ခဲ့တာပါပဲ။
(မြသိန်း ရဲ့ ဘာသာပြန် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ရဲမြလွင် ဘာသာပြန် ထွက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ မြသိန်းရဲ့ ဘာသာပြန်က ပိုပြီး ပြေပြစ် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် ထင်ပါတယ်)
ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ ကိုတော့ ၇ တန်း တက်တဲ့နှစ်၊ 1993 မြားနတ်မောင် မဂ္ဂဇင်း အထူးထုတ် မှာ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ message ကို အဲဒီ အချိန်မှာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရပါဘူး။ ဒါကလဲ သဘာဝ ကျပါတယ်။ ကျွန်မ အသက် ၁၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာကိုး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဝတ္ထုထဲက အကြောင်းအရာဟာ ကျွန်မ ခေါင်းထဲမှာ ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ မဂ္ဂဇင်းမှာ နှစ်လည်အထူးထုတ်မို့ ပါတဲ့ ဝတ္ထုတိုတိုင်းမှာ စာရေးဆရာတွေရဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေ ကိုယ်စီ ပါတာတောင် မှတ်မိနေပါတယ်။
ဂျူး ရေးခဲ့တာက "အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှု သက်သက် လို့ ကျွန်မတို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာ သင်ကြား နားလည် တတ်မြောက်ရမယ့် အတတ်ပညာတစ်ခုပါ" တဲ့။ (စကားလုံး အတိအကျ မဟုတ်ပါ)။
တက်ဆူးကိုး စာအုပ်ကို အပြန်ပြန်ဖတ်ရင်း၊ တခါပြီး တခါ ကျွန်မ ရလိုက်တဲ့၊ မြင်လိုက်တဲ့အရာတွေ ပြောင်းပြောင်း သွားတာကို သတိထားမိရင်း၊ ကလေး စိတ်ပညာကို အာရုံ ၀င်စားလာရင်း၊ ၉ တန်းလောက် အရောက်မှာတော့ ပြင်ပ အကြောင်းအရာ တစ်ခု (မိသားစုတွေရဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်နွယ် ပတ်သတ်မှု) နဲ့ ဆက်စပ်မိပြီး ဂျူးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ကျွန်မ ဖျတ်ခနဲ ရသွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီ ဝတ္ထုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ 2000 ခုနှစ်မှာ အဖြူရောင်များ အကြောင်း ကို ကျွန်မ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ကောက်ချက် တစ်ခုလည်း ချခဲ့မိပါတယ်။
(ယောအတွင်းဝန်ကို မြင်းထိန်းငတာက ပေးတဲ့ မှတ်ချက်မျိုး ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။)
"ဂျူး ဟာ တာဝန် ဆိုတာကို သိလွန်းလို့ အိမ်ထောင် မပြုခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်" လို့။
(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ တာဝန်ကျေတဲ့ စာရေးဆရာ ဆိုတာတော့ မလွဲဧကန် သေချာပါတယ်။)
ဒါကြောင့် generation မယူချင်ဘူး ပြောသူ တချို့ကိုလည်း ကျွန်မအနေနဲ့ "အတ္တကြီးရန်ကော" လို့ လွယ်လွယ် ကောက်ချက် မချမိပါဘူး။ ကိုယ့်မျိုးဆက်သစ်ကို ပြုစု ပျိုးထောင်တယ် ဆိုတဲ့တာဝန် ကို တကယ်သိရင်၊ တကယ်ကျေပွန်ဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်ဘဲလဲ ခံစားသိရှိလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ တာဝန်ကို ဘာမှန်းမသိဘဲ စွတ်ယူပြီး မကျေပွန်တဲ့ လူတွေထက်စာရင်၊ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ် မယူဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုတဲ့ လူတွေကို ပို သဘောကျပါတယ်။
ဥပမာ။ "မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းသို့ လမ်းလျှောက်ခြင်း" ထဲက Dr. ထား လို လူမျိုးပေါ့။
စကားစပ်ပြီး ပြောရရင် "Dr ခင်မောင်ဝင်း" ရဲ့ "အမေ နဲ့ ကျွန်တော်" ဖတ်နေချိန်မှာလည်း "ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ" ကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဒေါက်တာ့ အမေဟာ ချစ်ခြင်းအတတ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူလို့ ခံစားရစေပါတယ်။
အချစ် ဆိုတဲ့ အတတ်ပညာ အကြောင်းကို အဖြူရောင်များ အကြောင်း မှာ ကျွန်မ ဒီလို ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။
"သက်ရှိပင် ဖြစ်စေ ၊ သက်မဲ့ပင် ဖြစ်စေ...မိမိ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသော အရာကလေးတစ်ခုကို တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် .. သူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက် မှန်သမျှကို လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်စွမ်းပေးရန် တတ်သိနားလည်ပြီး မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်ခြင်းမှာ အချစ်၏ အတတ်ပညာပင် ဖြစ်သည်။"
***The interests of childhood and youth are the interests of mankind. (Janes)
Posted by Rita at 4/26/2009 06:53:00 PM9comments Links to this post
Labels: Sharing, Thought
(ဆူဆူညံညံနဲ့... ဘယ်သူတွေ ရောက်လာတာလဲ)
(အိပ်ရေးမ၀သေးဘူး။ တားတားက အိပ်ပုတ်)
(မေမေနဲ့ တီလေး မစု က တားတားကို ကြည့်နေကြတာလေ)
မနေ့က သူငယ်ချင်း မသူ (အေးမြတ်သူ) ရဲ့ အိမ်ကို သွားပြီး ပူတူတူလေး သွားကြည့်ကြတာ။
(မော်ဒယ် မဟုတ်ဘူးနော်။) သူက အသက် နည်းနည်း ကြီးလို့ "မသူ" လို့ ခေါ်တာ။
ကလေးလေးက နှစ်လ မပြည့်သေးဘူး။ တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးပါပဲ။
ပူတူတူးလေးတွေ ကြည့်နေရတာပဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
Passport လုပ်ပြီးရင် သူ့ဘွားဘွားနဲ့ မြန်မာပြည် ခဏ ပြန်နေမယ် ပြောတယ်။
သားသား "လက်ျာငြိမ်းချမ်း" လေး ထူးချွန်တဲ့ လူတော်လူကောင်းလေး ဖြစ်ပါစေ။ (လူချောလေးလည်း ဖြစ်မှာပါ။ ကြည့်ရတာ။)
Posted by Rita at 4/26/2009 04:40:00 PM 8 comments Links to this post
Labels: Friend, Photos
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့ကြောင့် နေ့၊ ရက်၊ အချိန်၊ နာရီ တို့က ကိုယ့်အတွက် ချိုမြ လှိုက်လဲ လာကြသည်။
သူ ဆိုသော အသိဖြင့် လောကထဲ တိုးဝင် ရှင်သန်ရသည်က ဘယ်တုန်းကနှင့်မှ မတူသလို...
သူ နှစ်သက်သည် ဆိုသည့် သီချင်း တစ်ပုဒ်ကပင်လျှင် ရင်ခွင်ထဲ အသည်းနှလုံးကို မိမိရရ လှုပ်ခါနိုင်စွမ်းသည်။ သူ ဖတ်နေသည့် စာအုပ် တစ်အုပ်ကပင်လျှင် အာရုံတွေကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်းသည်။
သူ့ အမှတ်တမဲ့ လေချွန်သံ သဲ့သဲ့လေး ကြားလျှင်တောင် ဖမ်းဆုပ် သိမ်းဆည်း ချင်မိပြီ။
ဘေးဘီကိုမှ သတိမထားမိလေဟန် မြောက်ကြွ ပေါ့ပါးစွာဖြင့် သူ လျှောက်လှမ်းလာတာ မြင်ရချိန်တိုင်း ကိုယ့် နှလုံးသားရဲ့ ဟိုးအတွင်းပိုင်းမှာ သံစဉ် တမျိုးစီ ရှိတဲ့ ဆည်းလည်းလေးတွေက နူးညံ့စွာ တချက်ချင်း တချက်ချင်း...လွင့် ပါး က ခုန် လာကြသည်။
အဲဒီ အသံလေးတွေက တိုးတိတ်သော်ငြား ဝေစည် ပျံ့လွင့် လို့နေတတ်သည်။
သူ လှမ်းလျှောက်လာရင်း လေတိုက်လို့ ဆံပင်ကလေးတွေ နဖူးပေါ်က လွင့်နေတာကို မြင်ရတဲ့အခါ ကိုယ်သာ သပ်တင်ပေးချင်စိတ်နဲ့ တိုက်တဲ့လေကို ရန်လိုမိတတ်သည်။
ကျောပိုးအိတ်ကို ပုခုံးပေါ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပစ်တင်လွယ်ပစ်ပြီး ဘေးနားက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို စကားလှမ်းပြောရင်း သူ ခပ်ဟားဟား ရယ်မောလိုက်လျှင် "အချစ် ဆိုတာ သူ့ဆီမှာပဲ ရှိတာပါ" ဟု တွေးတော မိတတ်သည်။
သူ အမှတ်တမဲ့ လှမ်းကြည့်လိုက်လျှင်ပဲ တစ်နေ့လုံးစာ အသက်ရှူလို့ မ၀ ဖြစ်တတ်သည်။
မလှပတဲ့ လက်ရေးစောင်းကလေးတွေပါတဲ့ သူ့ စာအုပ်ကလေးကို ခပ်ဖွဖွ ပွတ်သတ် ထိကိုင် ကြည့်ချင်မိသည်။
သူ့အင်္ကျီလက်ဖျားလေးကို ခေါက်တင်ပေးချင်မိသည်။
သူ တပိုင်းတစ ညည်းဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းမှန်သမျှ ချက်ချင်း ပြန်ရှာ နားထောင်မိတတ်သည်။
သူ့ အိပ်မက်တွေကိုကအစ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလို ခံစားကြည့်ချင်လှသည်။
သူ့ wallet လေးထဲမှာ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟလ ကြားရတဲ့ ကိုယ့် ဓါတ်ပုံ ခပ်ဝါးဝါးလေးကို သူ ဘယ်တုန်းက ရိုက်ယူခဲ့သလဲ မေးကြည့်ချင်လှပြီ။
ကိုယ့် နောက်နားကနေ စကားတခွန်း မဆိုဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အတူ လျှောက်လိုက်လာတတ်တဲ့အခါ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ဘယ်လို အရိပ်အရောင်လေးတွေ ရှိနေမလဲ နောက်ပြန် မလှည့်ဘဲ ကြည့်မြင်ချင်လှသည်။
ကိုယ် မရှိခိုက် မမြင်လိုက်ရဘဲ သူ ပြုံးလိုက်မယ့် အပြုံးတွေ၊ ရယ်မော စကား ဆိုသံတွေ၊ သူ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အကုန်လုံးကို နှမျောတသ မဆုံးပြီ။
သူ့ အပြုံးထဲမှာ ကိုယ့် အပြုံး၊
သူ့ ရယ်မောသံထဲမှာ ကိုယ့် အပြုံး၊
သူ့ စကားသံထဲမှာ ကိုယ့် အပြုံး၊
သူ့ လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ ကိုယ့် အပြုံး၊
"အချစ်" ဆိုတာကိုက ရင်ထဲကနေ နှစ်သိမ့်စွာနဲ့ စီးဆင်းလာတဲ့ "အပြုံးတစ်ပွင့်" ဖြစ်လိမ့်မည်။
(မောင့်ကို ဘာဖြစ်လို့ ချစ်ခဲ့တာလဲ လို့ တစ်ယောက်ယောက်ကများ မေးလာမည် ဆိုလျှင် ဘာမှ ပြန်မဖြေဘဲ ပြုံး၍သာ နေမိမည်။)
(နုစဉ် အခါက စာတွေပါလေ။)
Posted by Rita at 4/24/2009 11:46:00 PM 10 comments Links to this post
This, too, will pass !
တိမ်တိုက်တွေ လာနိုင်တာ သိထားပါ။
ပေါ်လာမည့် အလင်းရောင်ကို ငံ့လင့်ပါ။
ယနေ့ သင့်ကံကြမ္မာ မည်သို့ပင် ရှိစေ
ဒါလည်း ပြီးသွားမည် ဆိုတာ သတိရပါ။
J.G Saxe (1818-87)
မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ထဲက ကူးခဲ့တာပါပဲ။ ဘာမှ မှတ်မထားတော့ ဘယ်ကမှန်း မသိတော့ဘူး။
Posted by Rita at 4/19/2009 11:16:00 PM 8 comments Links to this post
Labels: Poem, Sharing, ကဗျာ
Educated Person is...
ရေးချင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက အဆုံးကို မသတ်နိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကဗျာ ရေးရတာ တော်တော် ခက်သွားပါပြီ။
စကားလုံးတွေဟာ လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ရောက်ကို မလာပါဘူး။
အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို နှစ်နဲ့ချီပြီး ၀င်စားနေခဲ့တာတောင် အပြီးသတ် မရေးနိုင်ဘူး။
မြန်မာပြည် ပြန်တုန်းက သယ်လာတဲ့ Note Book အဟောင်းတွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခု ပြန်တင်ပေးချင်ပါတယ်။
1999 September လထုတ် စတိုင်သစ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါတဲ့ "ဆရာ ကိုတာ" ရဲ့ အင်တာဗျူး တပိုင်းတစလေးပါ။
ကိုတာ့ စကားလုံးတွေ ကြိုက်လွန်းလို့ ကူးရေးထားခဲ့တာ။
ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနိုင်ကောင်းပါတယ်။
"Educated Person is the one who has learnt how to learn."
ပညာတတ် ဆိုသည်မှာ ဘယ်လို (ဘယ်ကဲ့သို့) သင်ယူရမယ် ဆိုတာကို သင်ယူ တတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်တယ်။
အချက်အလက်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေဟာ အမြဲ တိုးပွားနေတယ်။ တချို့ ဘာသာရပ်တွေမှာ ပညာဟာ နှစ်နှစ်အတွင်း နှစ်ဆ တိုးလာတယ်။ မနေ့က အချက်အလက်တွေက ဒီနေ့ မှားချင်မှားနေမယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူဟာ အမြဲ သင်ယူ နေရမယ်။ (Learn)
မှားနေလျှင် (သို့မဟုတ်) "စိုးစဉ်း ချွတ်ယွင်း ခေတ်နှင့် မလျဉ်းလျှင်" အဲဒီ အချက်အလက် အယူအဆ အမှားကိုလည်း အန်ထုတ်ပစ်နိုင်ရမယ်။ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ရမယ်။ (Unlearn)
ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး သင်ယူရမယ်။ (Relearn)
ပညာမတတ်သူတွေ အတော် များရင် ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ သာယာဝပြော စည်ပင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တာပါပဲ။ တည်ငြိမ်မှု ဆိုတာက နလပိန်းတုံးတွေ နေသော အရပ်မှာ ရှိကောင်း ရှိနိုင်မလား မသိပါ။ တည်ငြိမ်တဲ့ နလပိန်းတုံးတွေကိုတော့ ကျွန်တော် မကြိုက်ပါ။
အင်တာဗျူး အစ အဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ နေရာလေးပဲ ကူးထားတာပါ။
နောက်ဆုံး အပိုဒ်က အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့တော့ ထင်ရပေမယ့် ဘလော့ဂ်တောမှာ နေရင်း မကြာမကြာ သတိရမိတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း သဘောနဲ့ ပြောရရင် အသည်းနှလုံး ဆိုတဲ့ ကလီစာ သက်သက် ခံစားမှုကြီးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဦးနှောက် အတွေးအခေါ်နဲ့ ချက်ကျလက်ကျ fight တတ်တဲ့ fighter တွေ လိုတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
တည်ငြိမ်မှု ဆိုတာ အထက်မှာ ကိုတာ ပြောသလို ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေလို့ ရလာတာမျိုး ဆိုရင် မကောင်းဘူးလို့ တွေးမိလို့ပါ။
ငြိမ်းချမ်းတာကတော့ အမြင်မတူလည်း လေးစားမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းလို့ ရပါတယ်။
ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ်လို့ ပြောတာကို လက်မခံချင်ရင် နေလို့ ရပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါက ဒီလို မဟုတ်ပါဘူးလို့ ငြင်းချင်လည်း ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မဟုတ်ဘူးလို့ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ မငြင်းဘဲ ဒီလို ပြောခွင့် မရှိဘူးလို့ အကြောင်းမဲ့ ပြောတာဟာ လေးစားမှု ပါတယ်လို့ ကျွန်မတော့ မထင်ပါဘူး။
အဲဒီအခါမျိုးမှာ မြို့မေတ္တာခံယူမယ့် fighter တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ လိုလာတာပေါ့။
(ကျွန်မပြောတဲ့ fighter ဆိုတာ အထိမခံ ရွှေပန်းကန်၊ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် မရှိဘဲ ကတ်ကတ်လန်အောင် စွာတတ်တာကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။)
ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူးလေ။ ကျွန်မကိုက ဘာမှ မဆိုင်တာတွေကို လိုက်ဆက်စပ် နေတတ်လို့ပါ။
ကိုတာရဲ့ အင်တာဗျူးက "ပညာတတ်" တွေ အကြောင်းပါ။
အဲဒီတော့ ပညာတတ်တွေ အကြောင်းလို့သာ မှတ်လိုက်ကြပါတော့။
အဲဒီစာကို ကူးရေးခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ အပေါ်က စာကြောင်းတွေကို ပိုကြိုက်ရင် ကြိုက်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်မှာတော့ အောက်ဆုံးက bold & italic လုပ်ထားတာကပဲ အာရုံထဲ ရောက်နေပါတယ်။
အင်း... Addy သိရင်တော့ ပြောဦးမယ်။ "ဒေါ်ရီတာ ဒီ မာတုဂါမကို စမ်းချောင်းနားမှာ မထားခဲ့နိုင်ဘူးလား" လို့။ (comment မှာ အဲဒီအတိုင်း လာရေးနေမှာ စိုးလို့ ကြိုကန်ထားတာ။)
ကိုတာရဲ့ စာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်စေချင်တာက side bar မှာ တင်ထားတဲ့ Win / Win ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်လေးပါ။
အို ရှုပ်ပါတယ်။ copy & paste လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
Win/ Win Thinking !
Maturity (Win/ Win) စဉ်းစားသော သူတို့သည် ရင့်ကျက်ကြရ၏။ ရင့်ကျက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ...မိမိ သဘောထားကို ဖော်ပြရဲသလို ထိုသဘောထားအတွက် ခံရဲသော သတ္တိလည်း ရှိ၍ တပြိုင်နက် တဖက်သား၏ ခံစားမှု၊ တွေးမြင်ပုံတို့ကိုလည်း လေးလေးစားစား နားထောင်ချင့်ချိန် နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
တနည်းဆိုသော် သတ္တိနှင့် တဖက်သားအပေါ် စဉ်းစား ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းတို့ ဟန်ချက်ညီနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
(သင့်ဘ၀ မဂ္ဂဇင်း အဟောင်းပါ... တောင်အာဖရိကမှ မင်ဒဲလား ခေတ် ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးမှ)
Posted by Rita at 4/19/2009 05:04:00 PM7comments Links to this post
Labels: Sharing, This and That, Thought
Birthday Wish, from Bottom of My Heart!
ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ ပြည့်ဝနိုင်ခွင့်ရှိသောသူ
အလိုဆန္ဒ နည်းပါး ရောင့်ရဲနိုင်သောသူ
ရှင်သန်နေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ဆောင်ကြဉ်းနိုင်သောသူ
အနှောက်အယှက် ရန်ဟူသမျှ ဖယ်ရှားအောင်မြင်နိုင်သောသူ
ဆင်းရဲမှုအပေါင်းကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်သောသူ
သူတကာထက် ကောင်းမွန်သာလွန်သော ဘ၀များဖြင့် သံသရာကို ကူးဖြတ်နိုင်သောသူ
အကောင်းမွန်ဆုံး အငြိမ်းချမ်းဆုံး အမြင့်မြတ်ဆုံး ခရီးဆုံးပန်းတိုင်ကို ဘ၀တိုတိုဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်သောသူ ဖြစ်ပါစေ။
ထို့ထက်ပို၍ ... ကိုယ့် မေတ္တာတရားတွေနဲ့ အတူတူ
ထို့ထက်ပို၍ ... ဘ၀ဆက်တိုင်း...ဆက်တိုင်း
(၃လ ကြိုပြီး ရေးဖို့ idea ကို စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ 1st April ကစပြီး ဒီနေ့ရောက်တဲ့ထိ စိတ်တိုင်းမကျမချင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ရေးခဲ့ရပါတယ် )
comment ပိတ်ထားသော post အတွက် cbox မှ comment များ - အမှတ်တရ
13 Apr 09, 00:40
အန်တီချမ်း: အဲ မောင့် ကိုမန့်မရအောင်လုပ်ထားတာကိုး လူဇိုးနော်
13 Apr 09, 02:53
ဖိုးသင်္ကြန်: ဟဲ့ ငါလဲ ဒီနေ့မွေးတာဟ။ ရှုပ်ကုန်တော့မှာပဲ။
13 Apr 09, 06:18
strike: how did you know today is mybday..goshh
13 Apr 09, 08:59
13 Apr 09, 10:37
JulyDream: အဟမ်း အဟမ်း... ချောင်းဆိုးကြည့်တာပါ။ အဟက်...
13 Apr 09, 11:39
kom: ကိုယ်လံ ဆုတောင်းပေးသွားသည်.
kom: မွေးနေ့မှ သည် အေးချမ်းပါစေ
13 Apr 09, 14:20
sin dan lar: များလေ.. မောင့်ကို မန့်ချင်လို့ပါ မြတ်ရယ်... အဲငှယ်....။
14 Apr 09, 08:19
thetpaingthu: ဗွမ်း....... ထတော့.... အိပ်ပုတ်
14 Apr 09, 08:23
thetpaingthu: Bottom of my Heart ဆိုတော့ Heart တစ်ခုလုံးစာ မဟုတ်ဘူးပေါ့ မောင့်ကိုသနားလိုက်တာ
Posted by Rita at 4/13/2009 12:01:00 AM Links to this post
Labels: Birthday Wish, မောင်
(Sambawang က အပြန် ကိုယ့်ဟာကိုယ် Orchard, Takashimaya သွားပါမယ် ဆိုတာကို CityHall ကို အတင်းခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပဲ ထု ချင်တယ်။)
(အလကားပါ။ ရွံ့တွေ ဗွက်တွေနဲ့ ... S$ 15 တော့ "ပလုံ")
(ဒီ ၂ ပုံက Sambawang Park မှာ။ မလှလို့ မှောင်ပစ်လိုက်တယ်။ "မင်းခိုက်စိုးစံ" ကဗျာလေးတောင် သတိရမိသေးတယ်။ "နေ့ခင်းကြောင်တောင် ငါ့ကိုယ်ငါ မှောင်ပစ်လိုက်တယ်" ဆိုတာ...)
(ဒါက မနေ့က Toa Payoh ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ Dr. နန္ဒမာလာ ရဲ့ တရားပွဲက အပြန်) (အဲဒါကတော့ လှလို့ လင်းပေးလိုက်တယ်)
Posted by Rita at 4/12/2009 09:33:00 PM 8 comments Links to this post
Labels: Friend, Photos, Singapore
Photo from "Here"
ပါရမီတော် (တေးဆို။ မေရှင်) (တေးရေး။ မြို့မငြိမ်း)
ရင်၌ဖြစ်သောသားလို မဟာကရုဏာပွား သနားတော်မူသည်။
သြဃာ ၀ဲသံသရာ ကျင်လည်ကြရှာ ဝေနေယျ ဘ၀ကြာရှည်
အမြိုက်ရေအေးတိုက်ကာ လူ နတ် ဗြဟ္မာအား တရားပြကယ်မည်။
ဗောဓိသတ် အလောင်းအလျာ ပါရမီ သင်္ချေများစွာ ကမ္ဘာက ဖြည့်ရှာသည်။
အလွန်အမင်း စွန့်ခြင်းငါးလီ ပဉ္စမဟာပရိစ္စာဂီ
လောကတ္ထ ... ဉာတတ္ထ ... ဗုဒ္ဓတတ္ထ စရိယာ ကျင့်ရှာခဲ့သည်။
လောကသုံးပါးတို့၏ စီးပွားကို များအောင် ဆောင်မည်။
မျိုးတော် ဆွေတော် ရွေတော် အပေါင်း၏ ကောင်းကျိုးသာ မျှော်ကိုးရည်။
သဗ္ဗညုဉာဏ်ကို ရှေးရှု သမ္ဗောဓိ ဆုပန်သည်။
ဆည်းပူးခဲ့ရရှာသည် သုံးဆယ်အပြား ဘုရား ပါရမီ။
ဘုံနန်းဗိမာန် အိုးအိမ် စည်းစိမ် မယား ရင်ဝယ်သားလဲ မခင်ပြီ။
နှစ်သိန်းလေးသောင်း ထုလို အသားတော်စု ဘယ်လိုပြုပြု လှူမည်။
အသွေးထုတ်ဝေ သမုဒ်ရေ အမျှညီ
ဘိသိတ်တော်ခံ မကိုဋ်ဆောင်းခေါင်းဖြတ် ဒါန အလှူ ဘယ်သူမမီ။
မြီးဆံ တစ်မျှင်အတွက် အသက်သေပေစီ။
ထိုထုံးနှလုံးပြုကာ ကျင့်ရှာသည် သီလ ပါရမီ။
စကြ၀တေး စည်းစိမ် မခံလိုပြီ ဆိပ်ငြိမ်ရာ၌ ခိုမှီ တော မြိုင်ရပ်ဆီ
တကမ္ဘာလုံး လင်းအောင် ကြံဆောင်မည်
ထို ပညာ မီးရောင်ခြည် ၀င်း ပေတော့သည်။
ယောက်ျား ပီပီ လက်ရုံးရည်
ဘယ်ဆီ သောင်ကမ်း လမ်း မမြင်နိုင်သည်
သမုဒ္ဒရာ ခုနှစ်ရက်တောင် ကူးလျက် အောင်မြင်သည်
၀ီရိယ စွန်းထုတ် ကြိုးကုတ် ပါရမီ လောင်းမြတ် အာဇာနည်
အလျှံပြောင်ပြောင် လှံ ဓါး ထက်စွာများနှင့် လက် ခြေ အသား သူဖြတ်ညားလဲ မဖြုံပြီ
ရန်သူသည် ကိုယ့်ထီးနန်းကို လုတောင် မေတ္တာ ပွား ကိုယ်ကျင့်တရားမြတ် ခန္တီ
တောသုံးတောင် မီးလောင် ပတ်လည်
မိန့်တော်မူသည် မှန်သော စကားဖြင့် ထိုမီးကို ရှောင်စေပြီ။
ကိုယ်တော်ကို အမှုံ့ကြိတ် ရွှေစိတ် မတုန်သည်။
အဓိဋ္ဌာန် တော်ချက် မပြတ်တည်ကြည်
ချစ် မုန်းခြင်း ကင်းတဲ့ ဥပေက္ခာ တရား ပါရမီ။
ပါရမီတော် (၁၀) ပါး
၁) ဒါန ပါရမီ
၂) သီလ ပါရမီ
၃) နေက္ခမ္မ ပါရမီ
၄) ပညာ ပါရမီ
၅) ၀ီရိယ ပါရမီ
၆) ခန္တီ ပါရမီ
ရ) သစ္စာ ပါရမီ
၈) မေတ္တာ ပါရမီ
၉) အဓိဋ္ဌာန် ပါရမီ
၁၀) ဥပေက္ခာ ပါရမီ
ဖြည့်ကျင့်နည်း (၃) နည်း
၁။ ရိုးရိုး ပါရမီ= ကိုယ်ခန္ခာမှအပဖြစ်သော အရာများအတွက် မငဲ့ကွက်မှု။
၂။ ဥပ ပါရမီ= ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို မငဲ့ကွက်မှု။
၃။ ပရမတ္ထ ပါရမီ= ကိုယ်အသက်ကိုပင် မငဲ့ကွက်မှု။
ပါရမီ (၁၀) ပါး အပြား (၃၀) ဆိုသည်မှာ- အထက်ပါ ပါရမီတော် (၁၀) ပါးကို ဖြည့်ကျင့်နည်း (၃) နည်းစီ ဖြည့်ကျင့်ရတာကြောင့် မြှောက်လျှင် ပါရမီတော် (၃၀) ရပါသည်။
လောကတ္ထ ... ဉာတတ္ထ ... ဗုဒ္ဓတတ္ထ စရိယာ များအကြောင်းနှင့် ပါဠိ စာလုံးပေါင်း အမှားများကို gtalk မှ ရှင်းပြ ပြင်ပေးခဲ့သော ဆရာတော် ဦးဝိသုတ အား ကျေးဇူး အထူးတင်ပါသည်။
ကျွန်မ တော်တော်ကြိုက်နှစ်သက်မိတဲ့ သီချင်းပါ။
TV မှာ ရီရီသန့် ဆိုတာကို စ နားထောင်ဖူးတာပါ။
စောင်း မောင်နေ၀ါ လည်း ပါပါတယ်။
တော်တော်ကို နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။
ကြည်ညို သဒ္ဓါ တဖွားဖွား ပွားလာစေတယ် လို့ ခံစားရပါတယ်။
နောက် version တမျိုးကို တင်တင်မြ ဆိုပါသေးတယ်။
နောက်မှ နားထောင်ရတာဖြစ်တာရော၊ တင်တင်မြ version က လေးလွန်းတာရောကြောင့် သိပ် မကြိုက်လှပါဘူး။
ခု မေရှင် ဆိုတဲ့ version က ရီရီသန့် version နဲ့ တော်တော် တူပါတယ်။
သီချင်းပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း နိုင်ဝင်း ကို ကျေးဇူး သိပ်တင်ပါတယ်။ (ရှာရှာဖွေဖွေ ဘယ်က ရလဲ မသိဘူး)
တေးရေး ဘယ်သူလဲ ကူပြီး စဉ်းစားပေးလို့ ရမလား။
ကျွန်မတော့ "ရွှေတိုင်ညွန့်" များလား ထင်မိတယ်။
It can be downloaded & listened "Here"
တေးရေး မြို့မငြိမ်း ဖြစ်ကြောင်းပြောပေးတဲ့ "ဖိုးစိန်" နှင့် "ညီလင်း"ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Rita at 4/09/2009 09:18:00 PM 8 comments Links to this post
Labels: My Favorite Myanmar Classic Songs, Song
I came for...
ဟိုး ... ခပ်ဝေးဝေး သိပ်မလင်းတဲ့ ကြယ်ကလေးဆီက
ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီ တစ်ခုမှာ
အမှောင်တွေသာ ခင်းကျင်းတဲ့ ညယံထဲ
ဘာကိုယူလို့ ဘာကိုပြန်ပေးရမှန်း မသိတဲ့ လောကထဲ
ပူပူကျဲကျဲ အရိပ်နည်းပါးတဲ့ ကွင်းပြင်ထဲမှာ
သူရိန်နေမင်းရဲ့ ရှုသဘင် ခံယူရင်း
မတန်တဆ ၀င့်ကြွား ပြသဖို့
လျှပ်ပြက်သလို သူ တစ်ချက် အပြုံးမှာ
(6th April 2009)
Posted by Rita at 4/06/2009 11:10:00 PM7comments Links to this post
Labels: Birthday Wish, me, Poem, ကဗျာ
Where there is hate,
Let me sow faith.
Let me sow light.
Let me sow hope.
Let me sow pardon.
နေနော် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထဲက ကူးထားတဲ့ စာတန်းလေးပါ။
ရှင်တော့ ဘယ်လိုထင်မယ်မသိ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါ ကျုပ် ကိုယ်တိုင်က အဲလိုတွေ တွေ့ရင်မနေနိုင်လို့
ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ် မကောင်းရင် ကျမ ညံ့လို့ ကောင်းရင် အော်ရယ်ဂျင်နယ်က ကောင်းလို့ ပါ
ဒေါ်ရီတာ ရေ ကျမ ကိုစိတ်ဆိုးနဲ့နော် အဲလိုမိန်းမ လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တော့
အချစ်နဲ့ ခံစားပျံ့နှံ့ ပါရစေ
အဲဒီမှာ သံသယ ရှိနေရင်
ယုံကြည်မှု နဲ့ ခံစားပျံ့နှံ့ ပါရစေ
အဲဒီမှာ အမှောင် ရှိနေရင်
အလင်း နဲ့ ခံစားပျံ့နှံ့ ပါရစေ
အဲဒီမှာ စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း ရှိနေရင်
မျှော်လင့်ချက် နဲ့ ခံစားပျံ့နှံ့ ပါရစေ
အဲဒီမှာ နာကျင်ခြင်း ရှိနေရင်
ခွင့်လွှတ်ခြင်း နဲ့ ခံစားပျံ့နှံ့ ပါရစေ
အကျွန်ုပ်တို့ ရရှိနေတဲ့ ပေးအပ်ခြင်းတွေ အတွက်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းထဲက အကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခံရမှုတွေအတွက်
သေဆုံးနေခြင်းထဲက အကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ထာဝရ အသက်တာ အတွက်မို့ပါ။
(Translated By Addy Chen)
ကိုယ်ကတော့ စိတ်ဝင်တစား အချိန်ကုန်ခံ ဘာသာပြန်ပေးတာကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပြောတာပါ။
(War & Peace တင်ရင်ရော ပြန်ပေးမှာလားဟင်)
Posted by Rita at 4/06/2009 11:00:00 PM2comments Links to this post
ဒီနေ့စားတာ...နှင့် ဟိုဟိုဒီဒီ ဓါတ်ပုံများ
ချဉ်ပေါင်ဟင်း (ဘယ်လိုချက်တာလဲ မမေးပါနဲ့။ မေမေကြော်ပေးလိုက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်ကို ရေနွေးဆူဆူထဲ ပစ်ထည့်ပြီးမွှေလိုက်တယ်။ ဟင်းတစ်ခွက်ရရော)
(ကိုပေါ ကဗျာ ကြောင့် ၀ယ်လာမိတဲ့ ဂျူးမြစ်ကြော်။ :D ကျွန်မရဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဂျူးမြစ်လေးတွေကစ စားကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အကြိမ်ပေါင်း ထောင် သောင်းမက စားရရင်လည်း ကျွန်မကတော့ မြန်မာအစားအစာတွေပဲ စားချင်တယ်။)
ကော်ကော် (အသတ်သေခံမလား ကော်ဖီမသောက်ဘဲ နေမလားဆိုရင် အသက်ပဲ အသေခံသွားမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကော်ဖီမသောက်ရရင်လည်း သေသွားနိုင်လို့ပါ။)
(ဒါကတော့ Chinese New Year တစ်ရက်မှာ East Coast ကို ပျော်ပွဲစား သွားတုန်းက စားခဲ့ကြတာတွေ။ တူတူသွားတဲ့ သူငယ်ချင်း ညီမလေးတွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်တာပါ။ ကျွန်မကတော့ East coast ရောက်မှ MacDonald က ၀ယ်သွားတာ။)
(စုစုပေါင်း ၇ ယောက်သွားတာ။ ကျွန်မက ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနေလို့ မပါဘူး။ နှစ်ယောက်က ဘယ်ပျောက်နေပါလိမ့်။ လက်တစ်စုံတော့ တွေ့တယ်။)
(ကဲ... ကဲတား... ကဲတက်စ် လေးတွေပေါ့)
(မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ ကောက်ထုပစ်မိမယ့် အရာတွေ - ဗံဒါသီး)
နိုးနိုးချင်း မမ၀ါ blog ကို ရောက်တော့ (ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ဆိုလို့) စားချင်လွန်းလို့ သွားရည်ကျမိတယ်။
အားကျမခံ ကိုယ်လဲ တင်ဦးမှ ဆိုပြီး...
Breakfast နဲ့ Lunch ပေါင်းစားတာကို တင်လိုက်ပါတယ်။ (ပိတ်ရက်ဆို ညဉ့်နက်အောင်နေပြီး နေမြင့်မှ အိပ်ရာကထတော့ အမြဲ ဒီလိုပဲ ပေါင်းစားဖြစ်တယ်။ economy ကျတာပေါ့)
Posted by Rita at 4/05/2009 03:01:00 PM3comments Links to this post
Labels: Singapore, This and That
the serenity to
လက်ခံရန် တည်ငြိမ်အေးဆေးသည့် စိတ်
ပြောင်းလဲရန် ရဲရင့်သည့် သတ္တိ
ထိုနှစ်မျိုး၏ ခြားနားမှုကို သိရန် ဉာဏ်ပညာ
- အမည်မသိ -
စာအုပ်ထဲမှာ ဘာမှ မရေးထားလို့ ဘယ်က ကူးထားမိမှန်း မသိတော့ဘူး။
အဲဒီလို အရည်အချင်းမျိုးသာ ရှိရင် လောကကြီးမှာ လူလုပ်ဖို့ တော်တော် အဆင်ပြေမှာ။
comment မှာ Addy ရေးသွားတဲ့ ဘာသာပြန်လေးက ပိုကောင်းလို့ ထပ်တင်လိုက်တာပါ။
သူက ဘာသာထပ်ပြန် ပေးရင် စိတ်ဆိုးမလားတဲ့။ ကိုယ့်ကို ဘယ်လို မိန်းမစားမျိုးများ ထင်နေလဲမသိ။
စိတ်မဆိုးတဲ့ အပြင် ကျေးဇူးတောင်တင်မိပါသေး။
အပေါ်က ဘာသာပြန်ကလဲ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ပြန်တာမှ မဟုတ်တာ။ :D
Posted by Rita at 4/05/2009 10:41:00 AM3comments Links to this post
On the Journey to Your Dreams ...
On the Journey to Your Dreams
May you learn along the way
about life, yourself,
ဘ၀အကြောင်း၊ သင့်အကြောင်း၊ သင် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း
You will meet many people.
May you treat each individual
just as you want to be treated.
တွေ့သမျှ လူတိုင်းလူတိုင်းကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားပြီး
May you remember to keep in touch
with the old friends, too-
the ones who love you very much.
You will face many problems.
May you come to accept
Be strong, and do the best
ဘ၀ဆိုတာ ပန်းခင်းလမ်း မဟုတ်ပါလားဆိုတာ
လုပ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်အောင်
May you learn from them,
so that you can grow and move on asastronger
and wiser person.
အမှားတွေ ဆီက လေ့လာ သင်ယူနိုင်ပါစေ။
You will make important decisions.
May you know yourself
and chose what is best for you.
အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရပေလိမ့်မယ်
ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါစေ။
ဝေခွဲမရ စိတ်ထဲမှာ ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ရင်
အသည်းနှလုံးရဲ့ အသံကိုသာ နားထောင်လိုက်ပါ။
You will set goals for yourself.
to make your dreams true,
and live the life that you want.
သင့်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်တွေ ချမှတ်ရလိမ့်မယ်
သတ္တိ၊ ဗျတ္တိ အပြည့်အစုံ ရှိပါစေ။
(Tara Knudson) (Translated by လူထု စိန်ဝင်း)
ကလျာ မဂ္ဂဇင်း - February 2006
စာအုပ်ထဲမှာ ကူးထည့်ထားခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။
ကိုယ်တိုင် မရေးဖြစ်လဲ ကူးပြီး သိမ်းထားမိတဲ့ ကြိုက်တာလေးတွေ တင်သွားလို့ရအောင် ရန်ကုန်ကအပြန် ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေရော၊ တိုတို ထွာထွာတွေ ရေးတဲ့ notebook တွေပါ သယ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း ကိုတော့ နိုင်ငံနဲ့ လူငယ်တွေ အပေါ်မှာ စေတနာထားတဲ့ လူကြီးသူမတစ်ယောက်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဆရာရေးဖူးတဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် တပြည်တရွာမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ သားအကြောင်း၊ မြန်မာပြည်ကို ခဏအလည်ရောက်လာတဲ့ မြေးလေးအကြောင်းတွေ နည်းနည်းလောက်ပဲ ဖတ်မိတာတောင် ပြောမပြတတ်တဲ့ ဆွတ်ပျံ့တဲ့ ခံစားမှု မျိုးကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မ လေးစားတဲ့ ဆရာ ကျန်းမာ ရွှင်လန်းစွာဖြင့် အတွေးအခေါ်၊ ခံစားမှုနှင့် ခွန်အားပေးတဲ့စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
Posted by Rita at 4/04/2009 05:48:00 PM2comments Links to this post
(PS စာမရေးချင်ဘူး။ ရေးချင်စိတ်လဲ မရှိဘူး။
scanner ၀ယ်ပြီးရင်တော့ ယူလာတဲ့ ပုံနည်းနည်း တင်ဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်)
Posted by Rita at 4/02/2009 10:59:00 PM5comments Links to this post
Labels: childhood, me, Photos, remembrance
My month starts!
ချိုမွှေးသင်းပျံ့တဲ့ နွေလေပြည်လေးတွေ တိုက်ခတ်တတ်တဲ့လ။
အရင်ကတော့ အညာကို ပြန်နေကျ လ။
ငယ်ဘ၀ကို သတိအရစေဆုံးသော လ။
ဘာရယ်လို့တော့ မသိဘူး။ ဒီလကို ကိုယ်ပိုင်လို့ ထင်နေတတ်တယ်။
မွေးလဖြစ်တာလဲ တစ်ကြောင်း။ ကျောင်းပိတ်တဲ့ ရာသီမို့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ရလို့ ပိုင်တယ် ထင်တာလဲ တစ်ကြောင်း။
ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဒီလမွေးတဲ့သူတွေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရှိနေတာ။
ခင်အောင်ထွေး၊ နိုင်လင်း၊ ကိုသူရိန်၊ ညီလင်း၊ ချိုမာ၊ ရန်နိုင်၊ မိုးမြင့်၊ မဥမ္မာ
(အဲလို တူတဲ့လူတွေ များတာကောင်းတယ်။
တလတည်း မွေးနေ့တွေ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်၊ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပေး။
ပေးစရာရှိတာ ကျွေးစရာရှိတာတွေ အပြန်အလှန် လျှော်ပစ်လိုက်ကြတော့ ပြီးသွားရော...)
ပြီးတော့ Apple က CEO "John Sculley"... သူကတော့ သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မွေးနေ့တူလို့ ထည့်ရေးလိုက်တာ။
(ကိုယ်လဲ ပုလုကွေးဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ သူခိုးဆော့ဖ်ဝဲလ်ဆိုင်ကြီးမှာ CEO ရာထူးတောင်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆို ရာထူးပါတူတော့မှာ)
အိမ်မှာပဲ နေချင်တဲ့ လ။
(ရည်ညွှန်း။ ။ မြန်မာနိုင်ငံက ကျန်ခဲ့ပြီးသော April များသို့)
Posted by Rita at 4/01/2009 12:01:00 AM2comments Links to this post
Labels: Feeling, This and That
ကလေးငယ်များအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော အရေးကြီး အချက...